ကလေးမွေးတော့မယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
​မွေးမယ့်​ရက်​နီးကပ်​လာသူ​တွေပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊ ​မွေးရက်​​ကျော်​​နေသူ​တွေပဲဖြစ်​ဖြစ်​ က​လေး​မွေးချင်​လာရင်​ ဘယ်​လို​တွေဖြစ်​လာမယ်​ဆိုတာကို သိချင်​​နေကြမှာ​ပေါ့​နော်​။ ကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​​တွေကိုယ်​နှိုက်​က တစ်​ဦးနဲတစ်​ဦးမတူညီသလို က​လေး​မွေးပုံက​လည်း တစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​ မတူညီနိုင်​ဘူး။
အမျိုးသမီး​တွေ က​လေး​ခေါင်းစိုက်​တဲ့အ​ကြောင်း​ ​ပြော​ပြော​နေကြတာ ကြားဖူးကြမှာ​ပေါ့။ က​လေး​မွေးခါနီးအချိန်​မှာ က​လေး​လေးဟာ တင်​ပါးဆုံ​အောက်​ပိုင်းကို ​ရွေ့လာတတ်​တယ်​။ ဒါကို က​လေး​ခေါင်းစိုက်​တယ်​လို့ ​ခေါ်တယ်​။
ဒီလိုက​လေး​ခေါင်းစိုက်​လာတဲ့အခါ ဆီးအိမ်​နဲ့ သားအိမ်​​ခေါင်း​ပေါ် လာဖိတာ​ကြောင့်​ ခဏခဏဆီးသွားချင်​လာလိမ့်​မယ်​။
သားအိမ်​​ခေါင်းကို စစ်​​ဆေးခြင်းဖြင့်​ အ​ခြေအ​နေဘယ်​လိုရှိသလဲဆိုတာကို ဆရာဝန်​က သိနိုင်​တယ်​။ ကိုယ်​ဝန်​​နောက်​ပိုင်းကာလ​တွေ​ရောက်​မှ စမ်းသပ်​တာများပါတယ်​။ ဒီအချိန်​မျိုးမှာ သားအိမ်​​ခေါင်းပွင့်​ဟကျယ်​လာပြီး ပါးလာ၊ ဆန့်​လာတာ​ပေါ့။
တစ်​ချို့အမျိုးသမီး​တွေဆိုရင်​ သားအိမ်​​ခေါင်းစင်​တီမီတာအနည်းငယ်​​လောက်​ ပွင့်​ဟလာ​ပေမယ့်​ က​လေးမ​မွေး​ချင်​​သေးဘဲ ​အေး​အေး​ဆေး​ဆေးသွားလာလှုပ်​ရှားနိုင်​​သေးတယ်​။ ဘယ်​လိုပဲဖြစ်​ဖြစ်​​ပေါ့။ သားအိမ်​​ခေါင်းပွင့်​ဟလာပြီဆိုရင်​ ​မွေးခါနီးလာပြီလို့ ​ပြောလုိ့ရတယ်​။
3. အဖြူ အဆင်းများခြင်း
၃၇ပတ်​နဲ့ အပတ်​၄၀ကြားမှာ သားအိမ်​​ခေါင်းချွဲ​လေး​တွေ ဆင်းဆင်းလာတာကို​တွေ့နိုင်​တယ်​။ ​ဒီအချွဲ​တွေက ဘတ်​တီးရီးယားပိုးမွား​တွေ က​လေးဆီမဝင်​ရ​လေ​အောင်​ ကာကွယ်​​ပေးထားပါတယ်။
သားအိမ်​​ခေါင်းကျယ်​လာပြီး ပွင့်​ဟလာချိန်​မှာ ဆင်းလာတာများတယ်​။ ချွဲ​တွေအပြင်​ ​သွေး​စစ​တွေလည်း ဆင်းလာတတ်​တယ်​။ မကြာခင်​​မွေး​တော့မယ်​ဆိုတာ သိနိုင်​​ပေမယ့်​ က​လေး​မွေးဖို့ ရက်​သတ္တပတ်​နည်းနည်း ​စောင့်​ရတတ်​တယ်​။
သားအိမ်​ညှစ်​အားလည်း ပိုများပြီး ပိုပြင်းလာတတ်​တယ်​။ ဒီလိုက​လေးမ​မွေးခင်​ သားအိမ်​ညှစ်​တာကို ​ဆေးပညာအသုံးအရ Braxton -Hicks contractionsလို့​ခေါ်ပြီး က​လေးမ​မွေးခင်​ အစမ်းညှစ်​ကြည့်​တာလို့ ​ပြောနိုင်​တယ်​။ နာလည်းမနာ၊ ပုံလည်းမမှန်​ဘူး။
တကယ်​လို့ သားအိမ်​​ညှစ်​တာ ပိုပြင်း၊ ပိုနာလာပြီး ​ထမင်းစား၊ ​ရေ​သောက်​၊ လှဲအိပ်​​လိုက်​ရုံနဲ့ မ​ပျောက်​​တော့ဘူးဆိုရင်​ တကယ်​​မွေးချင်​လို့ ညှစ်​တာဖြစ်​နိုင်​တယ်​။ တစ်​ခါတစ်​ခါနာတဲ့အကြိမ်​​ရေကြား အချိန်​ကိုမှတ်​ထားပါ။ တစ်​ခါနဲ့တစ်​ခါနာတာ ၃မိနစ်​က​နေ ၅မိနစ်​​လောက်​ထိပဲ ခြား​တော့တယ်​ဆိုရင်​ ဆရာဝန်​ကို​ပြောပါ​တော့။
​ရေမြွာရည်​​ပေါက်​ပြီး က​လေးချက်​ချင်း​မွေး​တော့မှာလားလို့ မလန့်​ကြနဲ့ဦး​နော်​။ ၈-၁၀%​သော အမျိုးသမီး​တွေမှာသာ တကယ်​က​လေးမ​မွေးချင်​​သေးဘဲ ​ရေမြွာရည်​​ပေါက်​တတ်​တယ်​။
​ရေမြွာရည်​​တွေ​ဝေါခနဲဆင်းလာတာပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊ ​တစ်​​တောက်​​တောက်​​လောက်​ဆင်း​နေတာပဲဖြစ်​ဖြစ်​ တစ်​ခြားလက္ခဏာ​တွေကို လိုက်​ရှာကြည့်​ပါ။ ​မွေးခါနီးအချိန်​ဖြစ်​နိုင်​တယ်​။ တကယ်​လို့ လပြည့်​​နေပြီဆိုရင်​ ၂၄နာရီအတွင်း က​လေး​မွေးပါလိမ့်​မယ်​။
အမျိုးသမီးတစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​ က​လေး​မွေးပုံ​မွေးနည်း၊ ဆိုးပုံဆိုးနည်း မတူတတ်​ကြဘူး။ က​လေး​မွေးခါနီးကိုယ့်​ခန္ဓာကိုယ်​အ​ပြောင်းအလဲ​တွေကို လိုက်​ကြည့်​ပြီး တစ်​ခုခုအသစ်​အဆန်းဖြစ်​လာတယ်​၊ ပုံမမှန်​ဖြစ်​လာတယ်​ဆိုရင်​ သတိထားပါ။
အ​ပေါ်မှာ​ပြောခဲ့တဲ့လက္ခဏာအ​တော်​များများရှိလာ​ပေမယ့်​ က​လေး​မွေးဖို့ အချိန်​နည်းနည်းကြာနိုင်​​သေးတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်​တယ်​။ ​ရေမြွာရည်​​ပေါက်​သွားပြီဆိုရင်​​တော့ နာရီပိုင်း​အတွင်းမှာ ​မွေးရပါမယ်​။
မ​သေမ​ချောမ​ရေမရာဖြစ်​​နေတယ်​လို့ ထင်​​ရ​ပေမယ့်​ တကယ်​က​လေး​မွေး​တော့မယ်​ဆိုရင်​ သားဦးမိခင်​​တွေမှာ ၁၂နာရီက​နေ ၂၄နာရီ​လောက်​အထိ ကြာနိုင်​တယ်​။ ​မွေးခါနီး​မေ​မေ​တွေအားလုံးလည်း အ​ဆင်​​ပြေ​ပြေ​ချော​ချော​မွေ့​မွေ့​​မွေးဖွားနိုင်​ပါ​စေလို့ ဆု​တောင်း​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။
မှေးမယျ့ရကျနီးကပျလာသူတှပေဲဖွဈဖွဈ၊ မှေးရကျကြျောနသေူတှပေဲဖွဈဖွဈ ကလေးမှေးခငျြလာရငျ ဘယျလိုတှဖွေဈလာမယျဆိုတာကို သိခငျြနကွေမှာပေါ့နျော။ ကိုယျဝနျဆောငျတှကေိုယျနှိုကျက တဈဦးနဲတဈဦးမတူညီသလို ကလေးမှေးပုံကလညျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတူညီနိုငျဘူး။
အမြိုးသမီးတှေ ကလေးခေါငျးစိုကျတဲ့အကွောငျး ပွောပွောနကွေတာ ကွားဖူးကွမှာပေါ့။ ကလေးမှေးခါနီးအခြိနျမှာ ကလေးလေးဟာ တငျပါးဆုံအောကျပိုငျးကို ရှလေ့ာတတျတယျ။ ဒါကို ကလေးခေါငျးစိုကျတယျလို့ ချေါတယျ။
ဒီလိုကလေးခေါငျးစိုကျလာတဲ့အခါ ဆီးအိမျနဲ့ သားအိမျခေါငျးပျေါ လာဖိတာကွောငျ့ ခဏခဏဆီးသှားခငျြလာလိမျ့မယျ။
သားအိမျခေါငျးကို စဈဆေးခွငျးဖွငျ့ အခွအေနဘေယျလိုရှိသလဲဆိုတာကို ဆရာဝနျက သိနိုငျတယျ။ ကိုယျဝနျနောကျပိုငျးကာလတှရေောကျမှ စမျးသပျတာမြားပါတယျ။ ဒီအခြိနျမြိုးမှာ သားအိမျခေါငျးပှငျ့ဟကယျြလာပွီး ပါးလာ၊ ဆနျ့လာတာပေါ့။
တဈခြို့အမြိုးသမီးတှဆေိုရငျ သားအိမျခေါငျးစငျတီမီတာအနညျးငယျလောကျ ပှငျ့ဟလာပမေယျ့ ကလေးမမှေးခငျြသေးဘဲ အေးအေးဆေးဆေးသှားလာလှုပျရှားနိုငျသေးတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈပေါ့။ သားအိမျခေါငျးပှငျ့ဟလာပွီဆိုရငျ မှေးခါနီးလာပွီလို့ ပွောလုိ့ရတယျ။
3. အဖွူ အဆငျးမြားခွငျး
၃၇ပတျနဲ့ အပတျ၄၀ကွားမှာ သားအိမျခေါငျးခြှဲလေးတှေ ဆငျးဆငျးလာတာကိုတှနေို့ငျတယျ။ ဒီအခြှဲတှကေ ဘတျတီးရီးယားပိုးမှားတှေ ကလေးဆီမဝငျရလအေောငျ ကာကှယျပေးထားပါတယျ။
သားအိမျခေါငျးကယျြလာပွီး ပှငျ့ဟလာခြိနျမှာ ဆငျးလာတာမြားတယျ။ ခြှဲတှအေပွငျ သှေးစစတှလေညျး ဆငျးလာတတျတယျ။ မကွာခငျမှေးတော့မယျဆိုတာ သိနိုငျပမေယျ့ ကလေးမှေးဖို့ ရကျသတ်တပတျနညျးနညျး စောငျ့ရတတျတယျ။
သားအိမျညှဈအားလညျး ပိုမြားပွီး ပိုပွငျးလာတတျတယျ။ ဒီလိုကလေးမမှေးခငျ သားအိမျညှဈတာကို ဆေးပညာအသုံးအရ Braxton -Hicks contractionsလို့ချေါပွီး ကလေးမမှေးခငျ အစမျးညှဈကွညျ့တာလို့ ပွောနိုငျတယျ။ နာလညျးမနာ၊ ပုံလညျးမမှနျဘူး။
တကယျလို့ သားအိမျညှဈတာ ပိုပွငျး၊ ပိုနာလာပွီး ထမငျးစား၊ ရသေောကျ၊ လှဲအိပျလိုကျရုံနဲ့ မပြောကျတော့ဘူးဆိုရငျ တကယျမှေးခငျြလို့ ညှဈတာဖွဈနိုငျတယျ။ တဈခါတဈခါနာတဲ့အကွိမျရကွေား အခြိနျကိုမှတျထားပါ။ တဈခါနဲ့တဈခါနာတာ ၃မိနဈကနေ ၅မိနဈလောကျထိပဲ ခွားတော့တယျဆိုရငျ ဆရာဝနျကိုပွောပါတော့။
ရမွှောရညျပေါကျပွီး ကလေးခကျြခငျြးမှေးတော့မှာလားလို့ မလနျ့ကွနဲ့ဦးနျော။ ၈-၁၀%သော အမြိုးသမီးတှမှောသာ တကယျကလေးမမှေးခငျြသေးဘဲ ရမွှောရညျပေါကျတတျတယျ။
ရမွှောရညျတှဝေေါခနဲဆငျးလာတာပဲဖွဈဖွဈ၊ တဈတောကျတောကျလောကျဆငျးနတောပဲဖွဈဖွဈ တဈခွားလက်ခဏာတှကေို လိုကျရှာကွညျ့ပါ။ မှေးခါနီးအခြိနျဖွဈနိုငျတယျ။ တကယျလို့ လပွညျ့နပွေီဆိုရငျ ၂၄နာရီအတှငျး ကလေးမှေးပါလိမျ့မယျ။
အမြိုးသမီးတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ကလေးမှေးပုံမှေးနညျး၊ ဆိုးပုံဆိုးနညျး မတူတတျကွဘူး။ ကလေးမှေးခါနီးကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျအပွောငျးအလဲတှကေို လိုကျကွညျ့ပွီး တဈခုခုအသဈအဆနျးဖွဈလာတယျ၊ ပုံမမှနျဖွဈလာတယျဆိုရငျ သတိထားပါ။
အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့လက်ခဏာအတျောမြားမြားရှိလာပမေယျ့ ကလေးမှေးဖို့ အခြိနျနညျးနညျးကွာနိုငျသေးတာမြိုးလညျး ရှိနိုငျတယျ။ ရမွှောရညျပေါကျသှားပွီဆိုရငျတော့ နာရီပိုငျးအတှငျးမှာ မှေးရပါမယျ။
မသမေခြောမရမေရာဖွဈနတေယျလို့ ထငျရပမေယျ့ တကယျကလေးမှေးတော့မယျဆိုရငျ သားဦးမိခငျတှမှော ၁၂နာရီကနေ ၂၄နာရီလောကျအထိ ကွာနိုငျတယျ။ မှေးခါနီးမမေတှေအေားလုံးလညျး အဆငျပွပွေခြေောခြောမှမှေ့မှေ့ေးဖှားနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။